LED အ၀တ်အထည်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
LED Drinkware များ
LED ဦးထုပ်များနှင့် ခေါင်းစွပ်များ
Halloween ၏ရိုးရာဂိမ်းများတွင် သရဲယောင်ဆောင်ခြင်း၊ ပန်းသီးကိုက်ခြင်းနှင့် ရွှေဖရုံသီးမီးပုံးပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည် ။
1. သရဲတစ္ဆေဖြစ်အောင် ဟန်ဆောင်ခြင်း- Halloween သည် အနောက်တိုင်းရှိ သရဲပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေ့သည် သရဲတစ္ဆေများ ကြွသွားသည့်နေ့ဖြစ်သည်။ လူတွေက သူတို့ကို သရဲတစ္ဆေလို ကြောက်လန့်ချင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတော်တော်များများဟာ ထူးဆန်းတဲ့အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်ကြပြီး သရဲတစ္ဆေယောင်ဆောင်ကာ လမ်းတွေပေါ်မှာ လှည့်လည်သွားလာကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အရှက်မဲ့သူများ အနေဖြင့် ...
Halloween အတွက် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုလဲ။
21-06-01 တွင် admin မှ
1. Halloween မှာ သကြားလုံးပြင်ဆင်ပါ၊ နေ့ရောညပါ အတူတူစုလို့ရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ ချိုချဉ်တောင်းလို့ရတယ်။ "လှည့်စားခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်ဆံခြင်း" သည် Halloween အတွက် အံ့အားသင့်စရာဟု ဆိုရိုးစကားတစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သကြားလုံးသည် ယနေ့ခေတ်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာဖြစ်သည်။ 2. Magic costumes မျက်လှည့်ဝတ်စုံပြင်ဆင်ပါ..။
ဂျိုက်အိုမီးပုံးဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဂျိုက်အိုမီးပုံးရဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ။ ပွဲတော်ယဉ်ကျေးမှု?
Halloween Eve သည် မကောင်းဆိုးဝါး သရဲတစ္ဆေများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပွဲတော်များမှ ဆင်းသက်လာသောကြောင့် တံမြက်စည်းပေါ်ရှိ စုန်းများ၊ သရဲတစ္ဆေများ၊ မှင်စာများနှင့် အရိုးစုများသည် Halloween ၏ သင်္ကေတများဖြစ်သည်။ လင်းနို့များ၊ ဇီးကွက်များနှင့် အခြားညနေသတ္တဝါများသည် Halloween ၏ ဘုံအမှတ်အသားလည်းဖြစ်သည်။ အစပိုင်းမှာတော့ ဒီအကောင်တွေက အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ထင်တယ်...
Halloween အတွက် ဘာကစားရမလဲ။ လူကြိုက်အများဆုံး Halloween အငွေ့အသက်ပစ္စည်းများ ဤနေရာတွင်ရှိသည်။
1. Halloween အတွက် ရယ်စရာကောင်းသော မရှိမဖြစ် ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် တောက်ပသော မျက်နှာဖုံး Masks များသည် Halloween အငွေ့အသက် ထုတ်ကုန်များအတွက် အမြဲစိမ်းသစ်ပင်များ ဖြစ်ပါသည်။ အရိုးရှင်းဆုံး သာမာန်မျက်နှာဖုံးများမှ ယခု ရောင်စုံတောက်ပသော မျက်နှာဖုံးများအထိ၊ ဇာတ်ကောင်များမှ မျက်နှာမိတ်ကပ်အထိ တိရစ္ဆာန်ဦးခေါင်း ကာတွန်းဇာတ်ကောင်များအထိ ...
ပြပွဲခန်းမလိပ်စာ- 14/F၊Yongtong building.Renmin မြောက်လမ်း၊ Luohu ခရိုင်၊ Shenzhen
SHENZHEN မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံ- 200-1၊ shilianxin လမ်း၊ WulianZhugu၊ Longgang ခရိုင်၊ ရှန်ကျန်း
အတိုင်ပင်ခံ ဟော့လိုင်း- ၈၆-၇၅၅-၈၂၃၇၄၂၈၆
လိပ်စာ- ၁၄ ထပ်၊ Block A၊ Yongtong အဆောက်အဦ၊ 3146 Renmin မြောက်လမ်း
© မူပိုင်ခွင့် - 2021 : All Rights Reserved. Hot Products များ - ဆိုက်မြေပုံ
လက်အိတ်ကို ဦးဆောင်သည်။, Glowstick, Led Stick, အလှည့်ကျ ဦးဆောင်သည်။, Led Tumbler, ဓားအလင်း,